Ny Filazantsaran'i Petera na Evanjelin' i Piera dia evanjely apokrifa iray karazana amin' ireo Filazantsara sinôptika izay tokony ho voasoratra taorian' ny fisasahan' ny taonjato faha-2. Io no hany evanjely mitantara amin' ny antsipiriany kokoa ny nivoahan' i Jesoa avy tao am-pasana tamin' ny nitsanganany tamin' ny maty. Tao Akhimîm ao Ejipta no nahitana ny ampahany amin' io evanjely io. Ahitana fitantarana izay anaovan' i Petera "izaho" ny tenany io ampahan-dahatsoratra io. Miresaka momba ny fitsarana an' i Jesoa sy ny fanomboana azy tamin' ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin' ny maty izy.
Voatsindry mafy ao amin' io filazantsara io ny helok' i Herôda (izay voalaza ao amin' io evenjely io fa mpanjaka) sy ny an' ny Jiosy miohatra amin' ny an' i Pilato sy ny Rômana: ilay ampahan-dahatsoratra dia manomboka amin' ny fandavan' i Herôda sy ny Jiosy hanasa tanana tahaka an' i Pilato, alohan' ny hanameloka an' i Jesoa. Taorian' ny fiaingan' i Pilato dia namoaka didim-pitsarana koa i Herôda. Taorian' ny fanomboana an' i Jesoa miaraka amin' ireo jiolahy roa, ny vatan' i Jesoa dia napetraka tao amin' ny fasan' i Jôsefa avy any Arimatea izay voahidy tateraka sady nambenana miaramila rômana araka ny fangatahan' ny manam-pahefana jiosy, fa ny mpianatr' i Jesoa izay noroahina kosa dia namitsaka. Vavolombelon' ny fitsanganan' i Jesoa ho velona ireo miaramila. Nentina zava-mananaina miendrika anjely goavambe i Jesoa nefa nihoaran' ilay nitsangan-ko velona izy ireo. Nihazakazaka ireo miaramila mpiambina hampandre an' i Pilato. Nanambara ny fitsanganan-ko velon' i Jesoa tamin' i Maria Magdalena sy tamin' ireo namany tonga hamangy ny fasana kosa ny zava-mananaina fahatelo.
Ny lahatsoratra dia mifarana amin' ny fankalazana ny andro firavoravoan' ny mofo tsy misy masirasira miaraka amin' ny mpianatr' i Petera sy i Andrea ary i Levy izay ndeha hanjono any Galilea. Izany dia hita ao amin' ny fizaràna izay angamba anomanana ny fitantarana ny fisehoan' i Jesosa voalohany teo amin' izany toerana izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filazantsaran%27i_Petera&oldid=1010947"
Voaova farany tamin'ny 20 Aprily 2021 amin'ny 09:46 ity pejy ity.